23 Maktabadaha CSS si loogu daro websaydh leh taabasho muuqaal oo weyn | Abuurista khadka tooska ah
Maktabadaha CSS ee hadda jira waa caddeyn heerka sare ee naqshadeynta webka iyo sida kuwani ay ufududeeyaan markay timaado hirgalinta siyaabahaas quruxda badan ee lagu fahmayo waxa websaydhadu tahay.
Taasi waa sababta aan u sameyn doonno wadaag wadaag 23 maktabado CSS oo tayo sare leh ee farshaxanno kala duwan oo caddeeya sida wax waliba ugu suurtoobaan luuqaddan qaabeynta. Soojeedin xiiso leh oo kusaabsan kheyraadka si aad ula yaabto waxa lagu gaari karo CSS.
1 Xusuusnow Menu
2 Daruuraha CSS3D
3 Astaamaha CSS saafi ah
4 Baarka hagidda waxaa qoray Jan Kadera
5 Sawiro muuqaal ah oo duulaya
6 Giraan labalaab ah
8 Liistada badhanka midabada leh
9 Baararka horumarka ee CSS3
17 Nooca sawirka
19 Tilmaamayaasha xariijinta
20 Xamuulka CSS
21 Sawirka Sawirka
Una si qurux badan loo hagaajiyay demo taas oo aad ka heli karto illaa toddobo tusaale. Waxay adeegsadaan kala-guurka CSS3 iyo maxay noqon laheyd sirdoon weyn oo adeegsiga xulistayaal kala duwan si loo abuuro saameyn cillad sare leh.
Astaamaha CSS saafi ah
Maktabadani waxay ka kooban tahay qaar ka mid ah astaamaha ugu caansan dhammaantood sida Apple ama Twitter. Way ka xiiso badan tahay inaad ogaan kartid sifooyinka mid kasta oo ka mid ah astaamaha adoo dhigaya tilmaamaha jiirka. Waxaad ka heli kartaa dhammaan marinnada koodhka oo dhammaystiran xiriirka.
Baarka hagidda waxaa qoray Jan Kadera
Laga soo bilaabo codepen.io waxaan haynaa marinka bar-tilmaameedka 3D taas oo si yaab leh u socota oo aan si buuxda uga ogaan karno koodhkeeda. Waxyaabaha gaarka ah ee ku saabsan maktabaddan ayaa ah inay ka kooban tahay kaliya 65 khad. Astaamaha cusub ee CSS3 waxay kujiraan saameynta qotada dheer.
Sawiro muuqaal ah oo duulaya
Waxaad marin u leedahay casharka halkan ka. Qiimaheeda weyn ayaa ah Sidee siman animations marka aad dhex jiideyso alwaaxda sawirka. Waxaad ka heli kartaa afar kala duwanaansho si aad ugu darto websaydhkaaga oo aad ku gaarto natiijo aad u fiican.
Giraan labalaab ah
Waxaan nahay ka hor giraan si fiican loo abuuray leh animation wax soo saar weyn. Laga soo bilaabo codepen.io waxaad marin uga heli kartaa dhammaan koodhka ka kooban boqollaal xariiq.
Flexboxes waa habka cusub ee CSS ee lagu muujiyo tiirarka bogga. A hage cadaalad ah oo dhameystiran si loo fahmo weelladan.
Liistada badhanka midabada leh
Waxaad marin u leedahay dhammaan HTML iyo CSS ee loogu talagalay menu-gaan yaa qiraya jacayl badan oo midab. Waxaa gebi ahaanba lagu sameeyay CSS si aad ugu milmi karto luqaddan.
Baararka horumarka ee CSS3
In kasta oo ay ku qoran tahay Ingiriis, sida dukaamada buugaagta intooda badan, HTML iyo CSS waa kuwo sifiican u faahfaahsan loo baahan yahay in la helo baararka horumarka naqshada weyn. Gradients, khadadka iyo noocyada kale ee saamaynta muuqaalka ayaa adiga ku sugaya.
Caan ku ah GitHub, waa gebi ahaanba lagu sameeyay CSS. Xulo animation-ka aad rabto inaad ogaato, adiguna waa inaad gujisaa kaliya "Animate it" badhanka si aad u aragto saameynta ku jirta Animate.css. Waxaad kala soo bixi kartaa ama ka daawan kartaa GitHub.
Waxaan wajaheynaa aruurinta tilmaamayaasha awooda u adeeg dhammaan noocyada walxaha muuqaalka ah shabakadda. Dhagsii "Isha" waxaadna helaysaa dhammaan koodhka lagama maarmaanka u ah fulintiisa.
Una Maktabada badhanka CSS dhammaan dariiqooyinka iyo fikradaha lagu helo midka aad u baahan tahay si aad uga soocdo tartanka. Dhinaca bidix waxaad ka joojin kartaa qaababka ama saameynta aadan rabin inaad hesho oo aad markaa diiradda saarto mid gaar ah.
Waxaan nahay ka hor barnaamij kuu ogolaanaya inaad joojiso badhamada qaarkood in la abuuro mid si sax ah u ah waxa aan raadineyno. Waxaan u adeegsanaa dejimaha kala duwan ugu dambeyntiina waan soo saari karnaa koodhka aan u nuqul ka sameysan doono degelkeenna. Kheyraad aad u xiiso badan oo ku saabsan qaabeyntiisa iyo qaab ciyaareedkeeda weyn.
Midkii ka raadi midabka beddel xiiso leh iyo taasi waxay u oggolaaneysaa nooc deg deg ah boggag internet oo leh muuqaal muuqaal weyn.
Haddii aad taqaanno Minecraft, ciyaarta dhismaha, hubaal maktabaddan CSS way fududahay in la aqoonsado. Wareeg markaan ku riixno bartamaha inaad soo saarto shabakadaha.
Una saafi ah CSS font miisaanka fudud oo si fudud ugu habboon mashruucaaga soo socda.
Una ururinta badan oo animations ee astaamaha xamuulka ee CSS iyo HTML.
Qoraal nadiif ah oo ku jira lammaanaha CSSsi loo raro tilmaamayaasha nooc kasta. Ili weyn oo laga helo tilmaamaha lagama maarmaanka ah ee saxda ah ee boggaaga.
Kuwa kale font loogu talagalay soo dejinta astaamaha taas oo loo habeyn karo dhammaan noocyada animations.
Una maktabada CSS ee la qaadi karo iyo miisaan yar oo sawiro ah fasalkaas «hover».
Isha laga 49 gradients ama gradients sawir qaade dhammaan noocyada nuxurka iyo sawirada.
Un Qaab dhismeedka CSS oo ku saleysan Naqshadeynta Maaddada, mabda'a naqshadeynta ee Google u adeegsaday tiro badan oo barnaamijyadooda ah iyo nidaamkeeda hawlgalka ee Android.
Ha seegin ballanta iyadoo websiyada si heer sare ah loo dhammeeyey con sawirada svg.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 23 maktabado CSS oo tayo sare leh oo loogu talagalay naqshadeynta webka
Sawirada Roger Coll iyo sida aan u fahmayno
Lammaanahani waxay ka dhigayaan dukaanka buugaagta ee riyadoodu inay rumowdo si loo sii wanaajiyo xitaa